Lego Ideas 21328 Seinfeld သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံ Brick Fanatics
24 / 07 / 2021 08 / 02 / 2022 Dimitri 2118 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 21319 ဗဟို Perk, 21324 123 နှမ်းလမ်း, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, Brent Waller, Cosmo Kramer, Elaine စေလွှတ်, George Costanza, Ideas, ဂျယ်ရီ Seinfeld, Lego, Lego Ideas, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego VIP, LEGO.com, လူသစ်, reviews, Seinfeld, အဆိုပါ LEGO Group, VIP ဖတ်ပြီးသားမိ 14
အဆိုပါစိတ်အားထက်သန်စွာ - မျှော်လင့် Lego Ideas ၂၁၃၂၈ Seinfeld Brent Waller ၏ '90s sitcom သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတရား ၀ င်အစုအဖြစ်အသွင်ပြောင်း။ ၎င်းကိုတူညီသောရိုသေလေးစားမှုဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည် classic တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ။
Lego Ideas 21319 ဗဟို Perk အစုလိုက်အလျင်အမြန်ဆင်းရဲသားများကဲ့သို့စင်ပေါ်မှပျံသန်းအစုံနှင့်အတူ, ပကတိနှင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့ရိုက်ချိုးခဲ့သည် Lego စတိုး န်ထမ်းများကသူတို့ကိုထားနိုင်ဘူး။ The Lego Group သည်ယခုအောင်မြင်မှုကိုအခြားတစ်ခုဖြင့်ထပ်မံလုပ်ရန်မျှော်လင့်နေသည် Lego Ideas အစုလိုက်အပြုံလိုက် - လူကြိုက်များခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ - အောင်မြင်သော 1990 sitcom, Seinfeld အပေါ်အခြေခံပြီး set ကို။
တကယ်တော့ပြပွဲကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောရရင်အတော်အတန်နည်းပါးနေတာပဲ။ Seinfeld သည်အချိန်ကာလ၏အကြီးမားဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးသောဆုံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ စုစုပေါင်းဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၈၀ ဖြင့်ကိုးစီးစီးရီး ၉ ခုအတွက်အပြီးသတ်ကြည့်ရှုသူ ၇၆ သန်းကျော်အတွက်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံစုစုပေါင်းအခကြေးငွေရရှိခဲ့သည်။
Brent ၏ဒီဇိုင်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအဆင့်မှပြီးဆုံးသွားသောအခါပရိသတ်များသည်မိမိတို့လက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရရှိရန်စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် Lego ဂျယ်ရီ Seinfeld ရဲ့ AP ၏အနက်artment - စီးရီး၏အဓိကနေရာတစ်ခု - တူညီသောလွမ်းဆွတ်မှုနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များရောနှောရန်မျှော်လင့်သည် 21319 ဗဟို Perk အရမ်းရေပန်းစား ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာလာမယ့်ခဲ့ပေမယ့်ဘာသဘောတူညီချက်လဲ
theme: Lego Ideas အမည်သတ်မှတ်မည် - ၂၁၃၂၈ Seinfeld ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 69.99 / $ 79.99 / € 79.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,326 အသေးစားပုံများ: 5
စုစုပေါင်းအပိုင်း ၁,၃၂၆ ခုကိုနံပါတ် ၉ အိတ်များ၌ဖြန့်ပြီးမကြာသေးမီကကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် Lego Ideas အစုံလိုက်၊ လမ်းညွှန်လက်စွဲတွင်ရှည်လျားသောစီးရီးများနှင့်အစုံအတွင်းပေါ်လာသောစာလုံးများသရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည် - Jerry, best friends ဂျော့ခ်ျနှင့်အီလာတို့အိမ်နီးချင်း Cosmo Kramer နှင့် Jerry ၏မဟာနယူးမန်းစ်။
ပန်ကာဒီဇိုင်းပညာရှင် Brent Waller နှင့်အင်တာဗျူးများလည်းပြုလုပ်သည် Lego Brent ၏စိတ်ကူးကိုအမှန်တကယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသည်။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကအချို့သောအခြားပစ္စည်းများလောက်အသေးစိတ်မကျဘူး၊ ယဉ်ကျေးမှု၏အရေးပါမှုနှင့်ခေတ်သစ်ဟာသဇာတ်ကားအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက ပို၍ ပြောစရာရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သမိုင်းသင်ခန်းစာအတွက်ဒီနေရာမှာမဟုတ်ပါဘူး ၂၁၃၂၈ Seinfeld အားလုံးတည်ဆောက်အကြောင်းပါ။
Seinfeld ၏အဖြစ်အပျက်အများစုသည် Jerry နှင့်အတူဖွင့်လှစ်သောဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်များကိုမကြာခဏဖွင့်လှစ်လိုက်သည်၊ သူ၏ကုမ္ပဏီကိုစောင့်ရှောက်ရန်စားပွဲသေးသေးလေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များအနေဖြင့်တည်ဆောက်မှုမှာ ၈ × ၄ အပန်းဖြေစခန်း၊ စားပွဲနှင့်အုတ်နံရံများဖြင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်အတူတူပင်စတင်သည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။ ဒါကပြပွဲအတွက်ပျော်စရာနည်းနည်းလေးပါ၊ ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ခုတင်တွေနဲ့ဆင်တယ် 21319 ဗဟို Perk နှင့် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments၎င်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာရှိသူများအတွက်ကောင်းမွန်သော standalone display အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
အက်ပ်ဆီသို့artသူ့ဟာသူ ment လုပ်ပါ, ထိုသို့မကြာသေးမီအချို့ကဲ့သို့အများကြီးအတူတူပင်စတင်ခဲ့သည် Ideas အစုံ - ကဲ့သို့ 21319 ဗဟို Perk (ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤအစီအစဉ်အကြောင်းပြောခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းမည်ဟုကတိပေးသည်) သို့မဟုတ် 21324 123 နှမ်းလမ်း - ကြမ်းပြင်အာကာသကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်။ ထို့နောက်၎င်းကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောကြွေပြားများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောကြီးမားသောသံမဏိပြားများ အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသည်။ နံရံများ၊ ပရိဘောဂများနှင့်အသေးစားပုံစံများကိုနောက်ဆုံးတွင်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောထိတွေ့ထားသောအနည်းငယ်သောချောင်းများမှလွဲသည်။ ဤသည်ထိတွေ့သောကန်အနည်းငယ်နှင့်ဝေးအကြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ချောချောမွေ့မွေ့, လုံး - မဟုတ် - ထိပ်တန်းဗေဒ၏ပရိသတ်များအလွန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။
Seinfeld ရဲ့ apartment ထူးဆန်းတဲ့ထောင့်နံရံများစွာနှင့်အတူကဖို့အတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္hasာန်ရှိပါတယ်။ ယင်းတို့ကိုအခြေခံအားဖြင့်တိုက်ရိုက်တည်ဆောက်မည့်အစားအပိုင်းများကိုအနေအထားသို့တိမ်းယိမ်းလျက်ကြမ်းပြင်၏သေးငယ်သောtwoရိယာနှစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်ကြီးမားသောပတ္တာငယ်များအဖြစ်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအလုပ်ဖြစ်ပုံရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကနေနောက်ဘက်နဲ့နှစ်ဖက်စလုံးက ungainly မဟုတ်ဘဲလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စုစုပေါင်းဗေဒကိုအလုံးစုံမော်ဒယ်တစ်ခုအဖြစ်သက်ရောက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ရှေ့မှသာပြသနိုင်သည်။
ဒီအစုံထွန်းလင်းဘယ်မှာသော်လည်း, တလျှောက်လုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ရှုပ်ထွေးအသေးစိတ်ကိုမှတဆင့်သည်အချို့သောဖန်တီးမှု p တက်ကိုပူဇော်မသာarts ကိုအသုံးပြုမှု, ဒါပေမယ့်လည်းအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းမှအလွန်တိကျဖြစ်ကြသည်။ ပုံမှန်နေစဉ် Lego အသေးစားအတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်ကိုတည်ဆောက်သောအခါအစုံသည်တူညီသောနည်းစနစ်များကိုမှီခိုနိုင်သည်။ Ideas ဒီဇိုင်နာများ box ကိုအပြင်ဘက်စဉ်းစားခဲ့ကြတူသောအစုံအမြဲခံစားရတယ်။
ရုံးသုံးကုလားထိုင်ရဲ့အနက်ရောင် နည်းပညာ ခြေထောက်နှင့်စားပွဲခုံ၏အနက်ရောင်အရိုးစုခြေထောက်အဖြစ် cog သည်ခြေထောက်အဖြစ် cog ဖြစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်တွေ့ရသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပမာအချို့ဖြစ်သည် - နှင့်တည်ဆောက်မှုတိုးတက်လေလေတည်ဆောက်မှုများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လေဖြစ်သည်။
မီးဖိုချောင်ရှိမီးဖိုသည်ကင်အတွက်ရှေ့ဘမ်ပါသေးငယ်သည်။ ခြေထောက်ထိုင်ခုံများကိုအပြာရင့်ရောင်ဖယောင်းတိုင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နှင့်ရေခဲသေတ္တာနှစ်ခုစလုံးသည်ပျော်စရာကောင်းသောနည်းစနစ်ငယ်များ၊ နှင့်ထမင်းစားခန်းကုလားထိုင် ap ဖြစ်ကြသည်art1 ×2သံမဏိပြားများနှင့်အတူဘားလက်များကိုခြေထောက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ၁ × ၂ ပြုပြင်ထားသောသံမဏိပြားများနှင့်ကျောအနားယူရန်အတွက်သုံးထားသောပြားများကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါဟာ AP ကိုပတ်ပတ်လည်ယူနစ်ပါပဲartစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်တည်ဆောက်မှုများမှာမီးဖိုချောင်ဗီရိုနှင့်စာအုပ်စင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်စာအုပ်များ၊ ခွက်များ၊ ဖျော်ရည်များနှင့် trinkets များ၏ကိုယ်စားပြုမှုများပြည့်နှက်နေသော jigsaw ပဟေlikeိဆန်ဆန်နီးကပ်စွာတည့်တည့်တက်ကြွစွာစုစည်းထားသောပုဒ်မခွဲငယ်များဖြစ်သည်။ အားလုံးသည် Jerry ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတကယ့်အရာနှင့်တူသည်artment ။
ပျော်စရာကောင်းသည်နှင့်တည်ဆောက်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်အနည်းငယ်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သောလှည့်စားသည့်ထောင့်နှစ်ခု မှလွဲ၍ ၎င်းသည် 18+ အစုံအလင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကအကြောင်းအရာဟာကြီးပြင်းလာတဲ့ပရိသတ်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်လိမ့်မယ် (Seinfeld မှသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချိန်တွေကိုပြန်လည်ဖန်တီးချင်တဲ့လူငယ်ပရိသတ်တွေမများနိုင်ဘူး) ဒါပေမယ့်ဒီတည်ဆောက်မှုမှာ 9+ builder ကိုစိန်ခေါ်လိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်အလျင်အမြန်ပြီးစီးနိုင်သည့်အတွက်တည်ဆောက်ပုံအတွေ့အကြုံကိုတစ်ခါတစ်ရံနည်းနည်းပါးပါးခံစားရစေသည်။
ဒီလိုပြောခြင်းဟာဒီအမျိုးအစားတွေဟာတကယ်ကိုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပန်ကာဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းပါ ၂၁၃၂၈ Seinfeld ကျိန်းသေစိတ်ပျက်ပါဘူး။ Jerry နှင့်ဂိုဏ်း၏အကြိုက်ဆုံးဆုံတွေ့ခြင်း (ရေခဲသေတ္တာတွင်ဘုန်းတော်ကြီး၏ကော်ဖီစတစ်ကာများကိုတွေ့နိုင်သည်) အပါအ ၀ င်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပေါင်း ၃၀ ကျော်နှင့်ပြည့်နေသည်။ catchphrases (Kramer's 'Giddy Up' သည်အခြားစတစ်ကာတစ်ခုအဖြစ်ပုံရသည်)၊ classic ဖြစ်ရပ်များ (George Costanza ၏အထင်ကရ Semi- အဝတ်အချည်းစည်းဓာတ်ပုံကိုအသွင်ပြောင်းမြင်သည် Lego အတိတ်ကဇာတ်ကောင်များ (ဦး လေးလီယို၏ပုံတူသည်နံရံတစ်ချပ်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်) နှင့်လင်းယုန်မျက်လုံးပရိတ်သတ်များကိုတွေ့ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူများကိုလာရီဒေးဗစ်အားညိတ်ညံစွာဖုံးကွယ်ထားသည်။
ဤအညွှန်းများသည်သာမန်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များ၊ အခိုက်အတန့်များနှင့်မြင်ကွင်းများကိုအမှတ်တရများသည်အဆင့်တိုင်းနီးပါးတွင်ရေလွှမ်းလာသည်။ တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံများတွင်နောက်လတွင်ကစားခြင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်ရပ်များကိုတကယ့်လွမ်းဆွတ်မှုအတိုင်းအတာကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
sitcoms ကိုအခြေခံသည့်ယခင်မော်ဒယ်များကဲ့သို့ Jerry's apartment သည်လက်တွေ့ပြသမည့်အစားပြသထားသည့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကိုကိုယ်စားပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်artment ။ အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောစတူဒီယိုမီးလုံးလေးခုသည်နံရံများပေါ်မှချိတ်ဆွဲထားသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကြည့်လိုက်ရုံနှင့်ကြည့်။ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ သူတို့ကတကယ့်အစစ်အမှန်မှာအသုံးပြုတဲ့သူတွေနဲ့အတော်လေးတိကျပေမယ့်သူတို့ကသိပ်ကိုကြီးမားလွန်းနေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့်အခြားမျက်နှာပြင်တွေတော်တော်များများကြွေပြားတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အခါမှာထိတွေ့ကိုင်ထားတဲ့တုံးတွေကတကယ်ကပ်နေတယ်။
ဒါကဘေးဖယ်, အချောမော်ဒယ်ပင်မီးဖိုချောင်ကောင်တာနှင့် ap ၏ offset ထောင့်အထိမယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျသည်artment နံရံများ။ အထူးသဖြင့်အပြီးသတ်မော်ဒယ်ကိုလက်တွေ့ဘ ၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ၏အရောင်များမှသည်စားပွဲခုံပုံစံ၊ စင်ပေါ်ရှိပန်းချီကားများ၊ နံရံများနှင့်ပရိဘောဂများ၏အရောင်များနှင့်တံခါးများ၏ဒီဇိုင်းပင်လုံးလုံးလျားလျားရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အသေးစားငါးခုပါဝင်သည် ၂၁၃၂၈ Seinfeld: ဂျယ်ရီ Seinfeld, ဂျော့ခ်ျ Costanza, Elaine Benes, ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံး Cosmo Kramer နှင့် Jerry ရဲ့ဘေးထွက်, အမြဲတမ်းဆူး Newman ။ သူတို့ရဲ့မတ်မတ် ap ကိုကိုးကားကြဘူးနေစဉ်artစီးရီးကနေ icular ဇာတ်လမ်းတွဲသို့မဟုတ်ယခုအချိန်တွင်, သူတို့နေဆဲသင့်လျော်သောအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်နေကြသည်။
ဂျယ်ရီသည်ရင်းနှီးသောအပြာရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို (စီးရီးတစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ရပ်များစွာတွင်တွေ့မြင်ရပြီး) မိုက်ခရိုဖုန်းတပ်ဆင်ထားသည်။ ဂျယ်ရီသည်သူ့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောဒြပ်စင်အသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအသေးစားဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ သူ၏ဆံပင်ပုံစံသည် Seinfeld's mullet ကိုပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။ နောက်ကျောမှ၎င်းသည်လုံးဝကြည့်နိုင်သည်။
Elaine နှင့် George တို့သည်အကျွမ်းတ ၀ င် ၀ တ်စုံများဖြင့် ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ Elaine တွင်အခြားပုံနှိပ်သည့်မျက်နှာတစ်ခုရှိသည်။ ဂျော့ခ်ျတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်သင့်လျော်သည်။ ဂျော့ခ်ျသည်ပေါင်မုန့်နှင့်ငါးမျှားတံကိုသယ်ဆောင်နေပြီး Elaine သည်ရွှေငါးကိုတင်ဆောင်နေစဉ်ရာသီ (၇) ဇာတ်လမ်းတွဲ 'The Rye' ကိုရည်ညွှန်းသည်။ 21324 123 နှမ်းလမ်း), ရာသီ3၏ '' ယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင် '' ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းသည်။
Kramer တွင်စိတ်ကူးယဉ်ဆံပင်နှင့်အရောင်တောက်ပသောကျောက်ပုစွန် - အကျီင်္နှင့်အညိုရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီရှိသည်။ သူသည်ရာသီဥတု ၅'s 'Opposite' တွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ကော်ဖီစားပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်သူ၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောကော်ဖီစားပွဲစာအုပ်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေ (၃) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းရေငတ်အောင်လုပ်ခြင်းဟုထင်ရသည် classic ဇာတ်လမ်းတွဲ '' Alternative Side '' ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Seinfeld ၏ New Nemesis နှင့် Newman ပြပွဲ၏အဓိကဇာတ်ကောင်သည်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စာတိုက်ယူနီဖောင်းကို ၀ တ်ဆင်ပြီးစာလုံးဒီဇိုင်းပါသည့်ပုံနှိပ် 1 ×2tile ကိုသယ်ဆောင်သည်။
သိပ်မများပါဘူး ၂၁၃၂၈ Seinfeld အသစ်က p ၏လမ်းအတွက်arts, ရောင်စုံဒြပ်စင်၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ဂျယ်ရီရဲ့ဆံပင်အပိုင်းအစ bar, ဒါပေမယ့်သူကအစု၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူမည်သည့်ပြproblemနာရှိသည်ဖို့အနုတ်လက္ခဏာမလုံလောကျ။ ပေါင် ၆၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၇၉.၉၉ / ယူရို ၇၉.၉၉ သည်ဤအရွယ်အစားအတွက်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ ပျော်စရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်သီးသန့်အသေးစားငါးခုနှင့်အတူ။
အများအပြားကဲ့သို့ပင် Lego Ideas အစုံ, ၂၁၃၂၈ Seinfeld စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းစနစ်များနှင့်တည်ဆောက်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောပျော်ပွဲရွှင်ပွဲခွဲများနှင့်အတူအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းပရိတ်သတ်များအတွက်ပန်းခြံထဲကခေါက်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်သည်အရင်းအမြစ်အတွက်အလွန်အမင်းတိကျမှန်ကန်ပြီးကြည့်ရှုစရာများပြည့်နှက်နေသည်။ ပါဝင်သည်ဇာတ်ကောင်ငါးယောက်လည်းပြပွဲ၏အဓိကသရုပ်ဆောင်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ renditions ဖြစ်ကြသည်။
ဒီစုဆောင်းမှုကိုထည့်သွင်းထိုက်တန်တဲ့အစုတခုဟုတ်မဟုတ်သင်တကယ် Seinfeld ပန်ကာမည်မျှမှဆင်းသက်လာသည်။ ပြပွဲနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသေးသူများသည်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်းတောင်မှရိုးရိုးရှင်းရှင်းတည်ဆောက်ခြင်းကိုအနည်းငယ်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော် 'Seinfeld' ကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ နှင့်ပြသခြင်း။
ဒီအစုကိုအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့မပေးခဲ့ပါဘူး Lego အုပ်စု - ကျနော်တို့ကနေဝယ်လိုက်တယ် LEGO.comသင်သည် VIP အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်လည်းလုပ်နိုင်သည်။ (ဒီသြဂုတ်လ ၁ ရက်ကစပြီးတခြားသူတွေကိုရောင်းမှာပါ။ )
ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် (သင်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ခဲ့ကဲ့သို့)) ပါဘူး ၂၁၃၂၈ Seinfeld ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Ideas ၂၁၃၂၈ Seinfeld?
ပါဝင်သည် 1,000 ကျော်အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်သော်လည်း ၂၁၃၂၈ Seinfeldဒါကြောင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်လျင်မြန်စွာအတူတူလာပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိသောဆောက်လုပ်သူများက ၂ နာရီခွဲခွဲမှသုံးနာရီအတွင်းဤစက်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းပြီးစီးရန်လေးနာရီခန့်အချိန်ယူနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်artment ။
ဘယ်နှစ်ယောက်အပိုင်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ Lego Ideas 21328 Seinfeld လား။
၂၁၃၂၈ Seinfeld အပိုင်း ၁,၃၃၆ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၃၀၀ နီးပါးထက်ပိုပါတယ် 21319 ဗဟို Perk, အခြား Ideas တစ် ဦး sitcom အပေါ်အခြေခံပြီး set ။
ဘယ်လောက်ကြီးတယ် Lego Ideas 21328 Seinfeld လား။
၂၁၃၂၈ Seinfeld အကျယ် ၃၃ စင်တီမီတာ၊ ၁၄ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၁၈ စင်တီမီတာရှိသည်။ သင့်ရဲ့စင်ပေါ်မှာအရမ်းကြီးလွန်းတယ်ဆိုရင်၊ ပါဝင်တဲ့စင်မြင့်က 33 × 14 လုံးသာပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းတဲ့ display option!
ဘယ်လောက်မ Lego Ideas 21328 Seinfeld ကုန်ကျသလား
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည် (VIP များကယခု ၀ ယ်နိုင်သည်။ ), ၂၁၃၂၈ Seinfeld ယူကေတွင်ပေါင် ၆၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၇၉.၉၉ နှင့်ဥရောပမှယူရို ၇၉.၉၉ မှရောင်းချသည်။
← Lego 71044 ရှိပါတယ် Disney ရထားနဲ့ဘူတာဟာအနားယူပြီးပြီလား
LEGO ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ CITYခြင်္သေ့၊ ဆင်နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အသစ် ၂ ဝ ၂၁ တိရစ္ဆာန်များ →